Adiga anigaa qaas ii tahay, Adaan dunida kaa xushay, Indhaheygu aragoodu waa adiga, Iftiinka nolosheydu waa adi - Sawiro qurux badan oo naftu u riyaaqeyso - Sawiro qurux badan oo aad isticmaali karto xiliga haasaawaha - Sawiro qurux badan oo macaan ah
Sawiro Qurux badan oo ka turjumayo xiliga haasaawaha ama shukaansiga, qofba sida uu u yaqaano. Hadii aad heysato lamaane waa muhiim in aad gashaaan sawiro qurux badan si xusuustiina aysan u lumin.
Sawiro qurux badan waxa ay kaalin ka qaadan doonaan marka aad kala fog tihiin adiga iyo lamaanahaaga. Tusaale waxaad u xiistay qofka aad jeceshahay isla markaasna suurto gal kuu ma ahan in aad toos u aragto.
Hadii aad heysatay sawiro qurux badan oo xusuus idiin ahaa waxaad naftaada ku sasabi kartaaa in aad daawato sawiradaas oo tiraahdo" Waan ogahay in aan kaa fogaahay laakin xusuusnow in qalbigeygu kula joogo isla waqtigaaan".
Sidoo kale sawiro qurux badan waxaad u diri kartaa lamanaaga si aad u muujiso jaceylka aad u qabto adigoo raacinayo erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh sida: Erayadaan
Waxaan meeshan ka marneyn in aad raaciso geeraar jaceyl ah oo aad u macaan. Hadii aadan aqoonin sida loo qoro halkaan ka baro.
Noloshu waa raaxo markaad haysatid qof kaa farxiyo, Noloshu waa iftiin markaad heshid qof qaladkaaga wanaag ku saxo. Noloshu waa udgoon markaad heysatid qof adiga kuu nugul. Noloshu waa macaan markaad heysatid qof dhab kuu jecel. Noloshu waa kalsooni markaad heysatid qof kugu aamina naftiisa.
Erayo Jaceyl ah - Baro erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh
Geeraar Jaceyl oo gaaban
Sedex arimood oo muhiim u ah shukaansiga bilowga ah
Waxaan ahay shukaansi bilow balse ma aqaano sida loo qoro erayo macaan - Baro maanta
Baro sida ugu fudud ee aa ku ogaan karto Jaceyl daacad ah - Jaceyl daacad ah